Taariikh Nololeedka Super Star Mithun Chakraborty Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro) – Filimside.net
Taariikh Nololeedka Super Star Mithun Chakraborty Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
June 16, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: June 16, 2018
Maqaalkan hada ka hor ayaan daabacnay balse maanta waxaan ugu soo celinay in Super Star Mithun Chakraborty ay dhalashadiisa tahay.
Super Star Mithun Chakraborty waxa uu dhashay 16 June 1950 haatan waa 68-jir magaciisa rasmiga ah waa Gouranga Chakraborty.
Halyeegan wuxuu ku dhashay Kolkota gaar ahaan xaafada Paschimbanga waana reer Bengal.
Mithun ka hor inta uusan fanka kusoo biiray yaraantiisii wuxuu ka tirsanaa jabhada Naxalites balse markii dambe wuu isaga haray.
Mithun Iyo Bilawgiisii Fanka 70-kii
Mithun wuxuu fanka kusoo biiray sanadii 1976 wuxuuna kusoo baxay filimkii Mrigaya kaasi oo uu lahaa Mrinal Sen, nasiib wanaagsan Mithun filimkan wuxuu ku qaatay abaal marinta qaaliga ah National Film Award for Best Actor.
Inkastoo uu halmar magaciisa cirka galay hadana Mithun hoos u dhac xoogan ayuu la kulmay sanadihii xigay wuxuu boos yar ka helay filimka Do Anjaane uu waday Amitabh Bachchan iyo aflaan kale sida Phool Khile Hain Gulshan Gulshan iyo Amar Deep.
Balse sanadii 1978 flimkiisii Mera Rakshak wuxuu noqday Hit laakiin 1979 ayuu si rasmi ah u noqday atoore awood badan kadib markii filimkiisii Surakshaa uu magac iyo mansab ku yeeshay.
Mithun Iyo Waxqabadkiisii 80-kii
80-kii waa xiligiisii ugu fiicnaa Mithun waayo markan wuxuu noqday atoore laga daba dhaco sidoo kalena ay film sameeyayaasha baadi goobaan.
Weliba 10-kan sano Mithun wuxuu keenay 110-filim! filimada Hum Paanch iyo Aadat Se Majboor wuxuu ku muujiyay awoodiis Boxoffice-ka iyo inuu yahay atoore lacagtaada kuu bad baadi karo.
Mithun wuxuu Bollywood-ka ku qabsaday filimkii Disco Dancer sanadii 1982 kaasi oo guul weyn gaaray sidoo kalena noqday filimkii ugu horeeyay ee Hindi ah kaasi oo dibada ka gadmo laga bilaabo, China, Midowgii Soviet, Afrika, Asia oo dhan, Qaarada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayuu filimkan lacago badan kasoo xareeyay.
Sidoo kalena filamadiisii qoobka cayaarka Kasam Paida Karne Wale Ki iyo Dance Dance isagana guul weyn ayay gaareen.
Si dhaqsi ah ayuu ku noqday atooraha lacaga ugu badan aflaanta ku sameeyo kadib markii filimadiisii Mujhe Insaaf Chahiye, Ghar Ek Mandir, Pyaar Ka Mandir Jagir, Waqt Ki Awaz iyo Pyaar Jhukta Nahin. ay guulo taariikhi ah gaareen.
Mithun wuxuu noqday atooraha loogu jacel yahay dalka Hindiya min tuulo ilaa magaalo.
Mithun Iyo Waxqabadkiisii 90-kii:
Sidoo kale 10-sano Mithun wuxuu sameeyay in ka badan 100-filim balse xiliyadan wuxuu sameeyay aflaan uu amaan badan ku muteestay tusaale ahaan filimkiisii Agneepath wuxuu ku qaatay abaal marinta atoore caawiyaha oo ay bixiso shirkada Filmfare.
Sidoo kale Filim Bengal ah ee lagu magacaabo Tahader Katha ayuu sanadii 1992 ku qaatay mar labaad abaal marinta National Award for Best Actor.
Aflaantiisa maqaamka leh xiligan waxa ka mid ahaayeen yar Ka Karz, Pyar Ka Devta iyo Pyar Hua Chori Chori.
Balse bartamihii 90-kii Mithun wuxuu u guuray asia iyo qoyskiisa magaalada Ooty asigoo halkaas ka dhistay Hotel uu leeyahay.
Mithun Bollywood-ka wuu isaga dhex baxay balse wuxuu la yimid caqli uu ganacsigiisa sare ugu qaadayo wuxuuna sameyn jiray aflaan badan weliba kuwa qaar lacag la’aan ayuu ku sameyn jiray.
Hadafka uu ka lahaa waxay ahayd in Hotel-kiisa ku yaalo Ooty dad badan imaadaan sidoo kalena aflaantiisa meeshaas lagu jilo.
Taasi waxay sababtay in todobaad walbo filim cusub ee uu Mithun wado tiyaataradala saaro laguna sameeyo lacag yar.
Aflaantiisa guuleesteen ee qorshahan lagu sameeyay waxaa ka mid ah Dalaal, hool Aur Angaar, Muqaddar iyo Ravan Raaj: A True Story.
Waa Hotelka Uu Mithun Ku Leeyahay Magaalada Ooty ee dalka Hindiya.
Mithun sanadii 1995 wuxuu ku guuleestay abaal marinta laadarka ugu fiican oo ay shirkada Filmfare ku siisay filimkisii Jalaad.
Sidoo kalena aflaanta Bengali ah wuu samen jiray wuxuuna filimkii G.V.Iyer ku qaatay abaal marinta National Award for Best Actor markii sedexaad sanadii 1998.
Inta badan xiligan Mithun wuxuu xooga saaray dhanka ganacsiga taasi oo k dhigtay inuu hanti badan abuuro.
Mithun Iyo Waxqabadkiisa 2000 Ilaa Haatan:
Inta badan Mithun xiligan wuxuu ku mashquulay inuu sameeyo Aflaanta Bengaliga ah madaama uu ganacsade noqday.
Balse sanadii 2005 ayuu Bollywood-ka dib ugu soo laabtay wuxuuna wax ka jilay filimkii Elaan sidoo kalena wuxu boos caawiye ah ka qaatay aflaanta Lucky: Not Time for Love iyo Dil Diya Hai.
Balse sanadii 2007 ayuu amaan weyn ku muteestay filimkii Guru oo ay wada jileen Abhishekh Bachchan iyo Aishwarya Rai wuxuu noqday Hit sidoo kalena Mithun doorkiisa bilado badan ayuu ugu tartamay.
Haka reebin filimkii Chingari si wacan ayaa loogu amaanay kadiba wuxuu dhawaanahan la yimid aflaan uu boosas fiican ka qaatay sida Veer, Boss, Golmaal 3, Housefull 2 iyo Khiladi 786.
Ruug cadaagan sanadkii 2013 waxaa usoo baxay filimka Enemmy oo uu qarash gareeye ka ahaa waxaan la jilay markii ugu horeesay wiilkiisa Mimoh Chakraborty.
Filmkiisa u dambeyay ee Bollywood ah waxuu ahaa filimka Hawaizaada oo ay isla wadeen Ayushmann Khurrana kaaso la daawaday sanadkii 2015…
Mithun Iyo Barnaamijyadiisa Gaarka Ah:
Mithun wuxuu sanadihii ugu dambeeyay culeeska saaray sidii uu dhalin tayo leh usoo saari lahaa sidaa darteed wuxuu soo saaray barnaamijka hirgalay Dance India Dance kaasi oo ay shirkada Zee TV maal galiso waa barnaamij taxane ah.
Mithun Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Mithun waxaa u dhaxdo gabadha atirishada ahaan jirtay Yogeeta Bali oo u dhashay 4-caruur ah sedex wiil iyo hal gabar.
Mithun waxuu ku guulestay abaal marino kala nooc ah sida Nationl Film Award oo ku qaatay 2 jeer atooraha ugu wanaagsan filmada Mirgayaa iyo Tahader Katha halka atoore caawiye uu ku qaatay filmkii Swai Vivekananda.
Sido kale Filmfare Awards labo jeer ayuu ku guulestay midna waa atoore caawiye oo uu ku qaatay Agneepath halka laadarka ugu wanaagsan uu ku qaatay Jallaad…
Waxaa Aqrisay 1,940
filimka magaca janai nai loogu yeedhayo ee uu saacada wato mithun magaciisa maxaa la dhahaa.
waa filimka ay buuruhu qaylinayaan ii sheega magaciisa.